AventCoin စျေး - အွန်လိုင်း AVT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို AventCoin (AVT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ AventCoin (AVT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ AventCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
AVT – AventCoin
Market ကဦးထုပ်: $847 599.00
volume_24h_usd: $116 543.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ AventCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
AventCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
AventCoinAVT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.25AventCoinAVT သို့ ယူရိုEUR€0.212AventCoinAVT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.191AventCoinAVT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.228AventCoinAVT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.23AventCoinAVT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.58AventCoinAVT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč5.53AventCoinAVT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.932AventCoinAVT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.331AventCoinAVT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.35AventCoinAVT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$5.55AventCoinAVT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.94AventCoinAVT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.34AventCoinAVT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹18.72AventCoinAVT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.42.2AventCoinAVT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.343AventCoinAVT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.383AventCoinAVT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿7.78AventCoinAVT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.74AventCoinAVT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥26.68AventCoinAVT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩296.64AventCoinAVT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦96.84AventCoinAVT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽18.34AventCoinAVT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴6.87
AventCoinAVT သို့ BitcoinBTC0.00002 AventCoinAVT သို့ EthereumETH0.000651 AventCoinAVT သို့ LitecoinLTC0.0046 AventCoinAVT သို့ DigitalCashDASH0.00275 AventCoinAVT သို့ MoneroXMR0.00281 AventCoinAVT သို့ NxtNXT19.5 AventCoinAVT သို့ Ethereum ClassicETC0.0368 AventCoinAVT သို့ DogecoinDOGE72.14 AventCoinAVT သို့ ZCashZEC0.00303 AventCoinAVT သို့ BitsharesBTS7.7 AventCoinAVT သို့ DigiByteDGB8 AventCoinAVT သို့ RippleXRP0.888 AventCoinAVT သို့ BitcoinDarkBTCD0.00862 AventCoinAVT သို့ PeerCoinPPC0.829 AventCoinAVT သို့ CraigsCoinCRAIG113.9 AventCoinAVT သို့ BitstakeXBS10.66 AventCoinAVT သို့ PayCoinXPY4.36 AventCoinAVT သို့ ProsperCoinPRC31.36 AventCoinAVT သို့ YbCoinYBC0.000134 AventCoinAVT သို့ DarkKushDANK80.22 AventCoinAVT သို့ GiveCoinGIVE541.42 AventCoinAVT သို့ KoboCoinKOBO56.95 AventCoinAVT သို့ DarkTokenDT0.23 AventCoinAVT သို့ CETUS CoinCETI722